အကြောင်းအရာ WTE - World Trade Exchange
World Trade Exchange (WTE) သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘက်ပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သောအဖွဲ့ဝင်များ၊ တွဲဖက်များ၊ လိုင်စင်ရသူများနှင့်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်သည်။
World Trade Exchange (WTEပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုလျှံသောစွမ်းရည်များလဲလှယ်ခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဏ္advာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးပလက်ဖောင်းများ၊ အကြွေး၊ ကြွေးမြီလဲလှယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ပွဲစား၊ ကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးစင်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
World Trade Exchange (WTE) အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အကျိုးစီးပွားကင်းလွတ်သောကုန်သွယ်မှုချေးငွေကိုကုန်ကျစရိတ်သုညဖြင့်ရရှိရန်၊ အာမခံထားသည့်အရောင်း ၀ င်ငွေများရရှိစေရန်၊ သိုလှောင်ရုံအမျိုးအစားအားလုံးကိုရောင်းရန်၊ ကြွေးမြီလုံးဝမပေးဆပ်ရန်၊ ၂၄ နာရီအတွင်းဝယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၉၀% အထိလျှော့စျေးဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
WTE စီးပွားဖြစ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်များ၊ ငွေစုငွေချေးအသင်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလပ်များ၊ ချေးငွေသမဂ္ဂများ၊ ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ အစိုးရငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ကုန်သည်ကောင်တာများ၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်များ၊ ငွေလွှဲသူများ၊ E-money ထုတ်ပေးသူများ၊ ငွေပေးချေသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ္treာရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်း၌ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားတံဆိပ်များအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောဝင်ငွေများကိုမောင်းနှင်သည်။ WTE ကမ္ဘာ့အရှုပ်ထွေးဆုံးဘဏ္financialာရေးပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းပေးသည်
World Trade Exchange (WTE) လူအများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အစိုးရများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုသူတို့၏ဘ ၀ အဆင့်တိုင်းတွင်အောင်မြင်ရန်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးကုန်သွယ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးအကြွေးဘဏ္financeာရေး၊ ကုန်သွယ်မှုလဲလှယ်ရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖလှယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အကြွေးနှင့်ကြွေးမြီလဲလှယ်ခြင်း၊ သူတို့၏ဘဝအဆင့်တိုင်း၌ဘဏ္ာရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်သူတို့၏အကြီးမားဆုံးသောရည်မှန်းချက်များကိုစတင်ရန် - ကုမ္ပဏီများမှ Fortune ၅၀၀ အထိ - နှင့်၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သောအလုပ်မှာမတူကွဲပြားသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသောတန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးသုံးဆပြန်လည်ရရှိရန်၊ ၂၄ နာရီအတွင်းသိုလှောင်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုရောင်းရန်၊ အတိုးမဲ့ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုသုညကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ရရှိရန်၊ ကြွေးမြီများကိုသုညတန်ဘိုးဖြင့်ပြန်ဆပ်ရန်၊ ၂၄ တွင် ၀ င်ငွေ ၁၀၀၀% တိုးရန်ကူညီသည်။ နာရီ, ဝယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအထိ 24% လျှော့စျေးနှင့်ရက်ပေါင်း 1,000 အတွင်း 24% အထိငွေသားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါစေ။
WTE ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရောင်းချခြင်းမရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလက်မှတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများထံမှ ၄ င်းတို့၏စာအုပ်တန်ဖိုးအပြည့်ဖြင့်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများရှိကမ္ဘာ့လူသိအများဆုံးအဖွဲ့အစည်းများသည်မှီခိုအားထားနေရသည် WTE သူတို့၏အခက်ခဲဆုံးသောစီးပွားရေးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်၊ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊
ရလဒ်များကိုရရှိရန်သင့်ဘက်မှအားစိုက်မှု၊ အချိန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်မလိုအပ်ပါ။ WTE သင်၏ကိုယ်စားရာနှုန်းပြည့်အလုပ်ကိုလုပ်သည်။ WTE အောက်ပါရလဒ်များကိုရရှိရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
၂၄ နာရီအတွင်းစီးပွားရေးအတွက်အတိုးနှုန်း 0% ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်း ၀ င်စာရင်းသည်စက်မှုဇုန် ၇ ခုမှစက်မှုလုပ်ငန်းခွဲ ၇၀၀၀ ထက် ပို၍ အကျယ်ချဲ့သည်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကမ္ဘာ့အထူးချွန်ဆုံးကုမ္ပဏီများမှပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များကဒေါ်လာသန်း ၃၀ မှ ၅၀၀ ဘီလီယံအထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားကိုးနေကြသည် WTE သူတို့ကိုပို။ ပင်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှာ
General Electric ကုမ္ပဏီ
Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှကော်ပိုရေးရှင်းက
ယူနိုက်တက် Technologies က
အဆိုပါ Kraft Heinz ကုမ္ပဏီ
LARGE ကော်ပိုရေးရှင်းများ အသုံးပြုမှု WTE PLATFORM AS A စီးပွားရေး EDGE / စောင်ရန်းကို!
လူသိများသောကော်ပိုရေးရှင်းများကိုပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ကူညီပေးခဲ့သည် WTE PLATFORM သည်သူတို့၏အဓိကစီးပွားရေး“ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ယှဉ်သော“ အစွန်းအထင်း” ဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာဟိုတယ်ကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကလေကြောင်းလိုင်းပါ။ တစ်ခုကရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုကကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာအီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားကော်ပိုရေးရှင်းများထောင်နှင့်ချီ။ ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးသည်သူတို့၏အောက်ခြေလိုင်းများသို့ပေါင်းထည့်လိုက်သောကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ပြီဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနှင့်ချီ။ ဖြစ်သည်။
WTE PLATFORM ကို ၇,၁၆၈ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကအသုံးပြုသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်စာရင်း ၀ င်စာရင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ၇၀၀၀ ထက် ပို၍ ပါ ၀ င်သည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သံမဏိ၊ ဘဏ္financeာရေး၊ လေကြောင်း၊ နည်းပညာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများစသည်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းခွဲ ၇၀၀၀ ကျော်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအတွက်အသွင်ပြောင်းရလဒ်များရရှိစေသည်။
7,000+ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ FOR ဒီမှာနှိပ်ပါ
ကမ္ဘာ့ဖလား Intellectual Property အဖွဲ့
Siemens AG က
သင်၏ ၁၂ လရောင်းအားရည်မှန်းချက်ကိုပြောင်းပါ
WTE သင်၏ ၁၂ လ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်နှင့်ရရှိသောဝင်ငွေကိုသင်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရန် ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်လက်တွေ့ကျကျသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏စာရင်းထဲမှပမာဏအထိသင်၏လက်ရှိစီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းအကုန်အကျခံလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံစုံစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်း 2.85 နာရီအတွင်းခန့်မှန်းခြင်းနှင့် $ 24 ဘီလီယံအထိခန့်မှန်းရန်အိတ်ချိန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Roderigo Digel သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၉၆၀ မီလျံဖြင့်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
Lewes Hendon သည်သူ၏ ၀ င်ငွေကို ၁၀၀x နှင့်မြှောက်။ ဤအစီအစဉ်အတွက် ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၇၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
Saundra Toedtling သည် ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၆၀၀ မီလျံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Gino Colombo သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၇၂၀ မီလျံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း Markus Kieffer-Higgins သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ နီးစပ်ခဲ့သည်။
ရေနံချက်စက်ရုံကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်ရေးဒေါ်လာဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်
BIOPHARMACEUTICAL COMPANY သည် ZERO COST တွင် $ 2.3B RIVAL COMPANY ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလီယံဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် WTE သုညကုန်ကျမှာ။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
မတည်မငြိမ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်ကိုဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံဖြင့်ပေးဆပ်ခဲ့သည်။
ဘဏ်များအနေဖြင့်ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံအကြွေးတင်နေသောအကြွေးတင်နေသောအကြွေးတင်နေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ငွေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးနေ့စဉ်ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
23 ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များတန်ဖိုးနည်း $ 575M သုညကုန်ကျစရိတ်မှာ။
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပerိညာဉ်စာချုပ်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်ကျစရိတ်သုညဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းတန်ဖိုးရှိပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် ၂၃ စီးကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
သင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုမြှင့်တင်ပြီးအကြွေးကိုဆပ်နိုင်တယ် wte ပလက်ဖောင်း!
လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုနှင့်သင်၏ကြွယ်ဝမှုကိုဘဏ္viaာရေးမှတစ်ဆင့်သင်တိုးချဲ့နိုင်သည် wte ပလက်ဖောင်း!
အ wte ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းသော Way ကိုဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုတစ် ဦး ကဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီ WTE ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၃.၂ ဘီလီယံကိုတိတိကျကျခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၃.၂ ဘီလီယံရရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၂.၈၅ ဘီလီယံခန့်မှန်းရန်ခန့်မှန်းရန် Exchange ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အသုံးပြုတဲ့သံမဏိကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ WTE ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၄၇၉ သန်းခန့်မှန်းပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၄၇၉ သန်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူက ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းအား ၂၈၅၀% တိုးလာသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှ ၂၄ နာရီအတွင်းအရောင်း ၀ င်ငွေကို ၁.၇၅၀% တိုးလာသည် WTE.
သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည် ၀ ယ်ယူမှုကို ၁၅၀% တိုးမြှင့်သော်လည်းငွေအသုံးစရိတ်များကို ၉၉% လျှော့ချခဲ့သည်။
စင်ပေါ်ယူနစ်များ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူသည် ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းအား ၂၁၀၀% တိုးလာသည်။
Nealson Wollaston-joury သည်သူ၏ ၀ င်ငွေကို ၁၀၀x နှင့်မြှောက်။ ဤအစီအစဉ်အတွက် ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလျံရရှိခဲ့သည်။
Dame Oden သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၈၀ မီလျံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Jefferey Callanan သည် ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၆၀ မီလျံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Brock Kosslyn သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမြတ်ငွေ ၁၀၀ ဖြင့်မြှောက်။ ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ ၆၄၀ ရရှိခဲ့သည်။
Micah Whitbeck သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၉၇ မီလျံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဤအစီအစဉ်အတွက်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။
FOR အတွက်လက်မှတ်ထိုးကြသူ Clients များ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ wte နဲ့ PROGRAM
Art Reheem သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ ၅၃ မီလီယံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Antonin Rowe သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၂၂ မီလီယံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Nathanil Wang သည် ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၂၇ မီလျံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဤအစီအစဉ်အတွက်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။
ဆစ်ဒနီ Chevallier သည် ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၃၆၀ မီလျံဖြင့်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
Torry Mcelwee သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၂၄၀ မီလျံသို့ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Charles Rogantin သည် ၁၂ လတာဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၉၃ မီလျံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းယောရှိသည်ဒေါ်လာ ၇၅၀ သန်းရရှိခဲ့သည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း Jackson သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးရရှိခဲ့သည်။
Brizy သည်ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
Zakis သည်ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁၃ သန်းရရှိခဲ့သည်။
Joan သည်ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာသန်း ၂၀ ရရှိခဲ့သည်။
လီယူသည်ဤအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁၅ မီလျံထုတ်လုပ်သည်။
Clients များ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ - Vol 1-10
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 1
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 9
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 8
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 7
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 6
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 5
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 4
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 3
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 2
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 10
Clients များ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ - Vol 11-20
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 11
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 20
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 19
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 18
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 17
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 16
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 15
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 14
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 13
အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ Vol 12
wte ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် WTE အဖွဲ့ဝင်များသာ!
ဒီမှာနှိပ်ပါ WTE အသင်းဝင်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဒီစာမျက်နှာ ၄၈ မျက်နှာရှိတဲ့ဒီပုံကိုကူးယူပါ WORLD TRADE EXCHANGE